travelgermany Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: travelgermany
နေအိမ် > travelgermany
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောတောင်ထိပ်များ, blooming ချိုင့်, ရေတံခွန်များ, ရေကန်များ, နှင့်ကွဲပြားခြားနားတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်, ကမ္ဘာ့မမေ့နိုင်သောသဘာဝသယံဇာတများတည်ရှိရာဥရောပ၏အိမ်ဖြစ်သည်. နွေ ဦး ရာသီတွင်ပွင့်လန်းသောကြီးမားသောစိမ်းလန်းသောမြေများကိုဖြတ်သန်းခြင်း,5ဥရောပရှိအလှပဆုံးသဘာ ၀ သိုက်များမှာခရီးသွားများအတွက်ကြိုဆိုသည့်အမျိုးသားဥယျာဉ်များဖြစ်သည်…
ဥရောပရှိအလှပဆုံးရှုခင်းအချို့သည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်။ ရောက်ရှိရန်လွယ်ကူသည်. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကြိုတင်စီစဉ်မထားရင်ဥရောပခရီးစဉ်ကအတော်လေးစျေးကြီးနိုင်ပါတယ်. ဥရောပမြို့တော်အများစုကမင်းရဲ့ခရီးသွားလာရေးဘတ်ဂျက်ကိုတိုးချဲ့လိမ့်မယ်, နေရာအတော်များများရှိတယ်…
သင်ရုံဂျာမနီမှာ Bavaria မှတဆင့်ခရီးစဉ်စီစဉ်စတင်ခဲ့ကြလျှင်, သငျသညျဖြစ်နိုင်ခရီးစဉ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေကြတယ်. သငျသညျအမြားဆုံးဖွယ်ရှိအလည်အပတ်ခရီးမှအံ့သြဖွယ်သောအရပ်နှင့်သက်သက်နံပါတ်လွှမ်းလျက်ရှိသည်. Plus အား, သင်တို့ရှိသမျှသည်တစ်ဦးမှာသူတို့ကို fit ချင် 10 ရက်ပေါင်းခရီးစဉ်…
ဘာလင် မှစ. ယူပါရန်ရေပန်းအစားဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောနေ့ခရီးများထွက်ဘာလင်ကိုယ်တိုင်ကသွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်စိတ်ကူးရာအရပျဖြစ်ခြင်းရှိနေသော်လည်းတစ်ဦးမဖြစ်မနေများမှာ! သငျသညျနေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားရန်ဂျာမနီမြို့တော်အလုံအလောက်ကြီးမြတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်. သို့သျောလညျး, day trips from Berlin to the neighboring towns and countryside…
နှင့်အချက်အပြုတ်အစဉ်အလာ - ဥရောပတစ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများ၏အံ့သြဖွယ်အစည်းအဝေးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သောလူမြိုး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကွဲပြားဝိသေသလက္ခဏာရှိပါတယ်, အရာကကမ်းလှမ်းညာဘက်င်း၏သမိုင်းနှင့်အခြားအရာအားလုံးထဲသို့ဧည့်သည်များဆွဲယူ. ထိုအခါအချို့နိုင်ငံများရှိ, ကြောင်းကိုလည်းအရသာအချိုရည်ကိုဆိုလိုသည်! Those of…